Ọ dị mma ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ na mmiri ozuzo? - Wheels
Isi > Wheels > Okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Ọ dị mma ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ na mmiri ozuzo?
Na-agba ịnyịnyan'imemmiri ozuzoka kariridị ize ndụkarịana-agba ịnyịnyana ọnọdụ akọrọ maka ihe doro anya: na-amị amị mgbe mmiri dị. Naokporo ụzọonwe ya na-amaka. Ejiri agba na ígwèokporo ụzọihe mgbochi dị ka akpụrụ mmiri. Ọ na - ewe ogologo oge iji kwụsị ma ọ dị mfe ịpụ apụ, yabụ ịkwesịrị ịkwụsị breeki na mbụ, ọkachasị na mmiri mmiri.01.09.2020
mmiri na-amị amị na sketchy ọnọdụ ị bụ otu n'ime ndị ezi ihu igwe cyclist ma ọ bụ ị chọrọ ịbụ ihe niile ihu igwe agba ígwè? Anyị ga-agbago gị n'ọnọdụ ihu igwe niile na otu ọ joyụ na obi ike ị nwere mgbe ị na-agba ịnyịnya na anyanwụ ihe ịma aka m na ihe ịma aka anyị bụ ime ka ị nọrọ naanị mmadụ abụọ anyị chọrọ ịnụ n'ọnụ gị ma ịchọrọ ịnya na mmiri ozuzo ma ọ bụ nke gị igwe kwụ otu ebe n'oge oyi ọnwa ájá na-achịkọta na kemmiri ihe apụl ihe banyere gị m asị m bụ ndokwa bụghị m iko tii ọma ma eleghị anya, mgbe isiokwu a anyị ga-amalite na Atụmatụ na otú kwadebe gị igwe kwụ otu ebe maka ịnyịnya na mmiri ihu igwe, nke ka mma gị igwe kwụ otu ebe a kwadebere, mma ị ga-enwe nchebe mgbe ụgbọala ụgbọala Ee, ugbu a, m ga-asị na ihe kacha mkpa bụ gị na taya Your na taya bụ n'ókè nke na kọntaktị n'etiti gị na ụzọ m na-eche ihe ndị ọzọ adịgide ị nwere, ndị ọzọ obi ike ị ga-enwe mgbe ị na-anya Ugbo ala n'okporo ụzọ ndị a na-amị amị ma a bịa n'ịhọrọ taya gị, anyị na-akwado ezigbo taya oge niile nwere njigide na nzọ ụkwụ, ya na mmiri nwere ike gbasaa ebe a na gcn anyị na-eji Pirelli ma ha nwere nnukwu oge niile na taya na thei r nsoro ee m ga-ekwukwa ihe mere na adighi ele anya na obosara nke taya gi? Họrọ ihe dịka 25mm ma ọ bụ ọbụlagodi 28, nke a pụtara na ị ga-enwe ezigbo nkasi obi mgbe ị na-anya ụgbọ ala na-akawanye njọ mana ị ga-enwe nchedo ntụpọ dị mma mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ mmiri. Ọ ga-eme nke ọma na ị nwere nnukwu unyi n'etiti okporo ụzọ yana ọ nwere ike belata ohere nke ntụpọ, yabụ ee, ịchọrọ ịkwadebe, ị chọghị ịma, ee, n'ezie akụkụ ọzọ dị mkpa nke gị Igwe bụ iyabya unu. Propbụ onye ịga n'ihu bụ akụkụ dị mkpa nke gị nke mere na ọ bara uru ị attentiona ntị na ọsọ dị mkpa ọbụlagodi na mmiri dị mkpa dayyeah yabụ anyị ga-adụ gị ọdụ ka ịzụta ụfọdụ Wet Lube Wet Loops ndị pụrụ iche emere maka ụbọchị mmiri ahụ iji nyere aka duzie mmiri ahụ. agbụ gị ma debe ya nke ọma ma keghee oke mmiri mmiri.
N'ụbọchị mbụ dị ka Manon kwuru na anyị chọrọ ilekọta agbụ anyị n'ihi na nke ahụ ga - enyere anyị aka ịga ngwa ngwa jide ha ogologo oge, ọ na - apụ dị ka m kwuru tupu m nwee obi ụtọ ịgba ọsọ na mmiri n'ihi na ọ dị m ka m nwere uru karịa ndị mụ na ya na-agba bụ ihe gbasara njikwa igwe kwụ otu ebe na ịgbanye n'okporo ụzọ mmiri, mana mgbe a bịara na braking, ịnwere ike ịgbaji ike n'okporo ụzọ ndị a na-enweghị skidding, mana n'okporo ụzọ mmiri, ọ dịchaghị agbaghara ịbanye na brekị mmiri mmiri Enweghị ohere dị elu na wiilị gị ga-agbachi ma wepụpụ ma n'ọnọdụ kachasị njọ, ị ga-ada. Ihe niile gbasara imeghari ijide gị, yabụ kedu nrụgide ị na-etinye na brek gị ka wiil gị ghara ịkpọchi mmiri. Nkuku ọzọ bụ obere nkà ị chọrọ ịkụ aka megide ma e jiri ya tụnyere ihe ị ga-akụdoro Bee Bee gị ntakịrị ka ọ bụrụ na ị banye n'akụkụ ka ị na-agbacha ọsọ ọ ga-aga nwayọ nwayọ na ụgbọala, ọ bụrụ na ịchọrọ gbagoro n'usoro sara mbara karịa nke nkịtị ị gaghị enwe ike ịnya igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ dabere n'akụkụ ala akọrọ E nwekwara ihe ole na ole ndị ọzọ ị ga-elezi anya mgbe ị na-anya n'okporo ụzọ mmiri ndị a, dịka ọmụmaatụ mgbe mmiri nwere ike ịnweta aghụghọ ma ha abụghị n'ezie esemokwu mgbe akọrọ, gụnyere mkpuchi olulu mmiri na nkwukọrịta ma ọ bụ gburugburu dị ka ụgbọ ala nwere ike ịnwe ihe mmanụ ma ọ bụ ụfọdụ omume agbafuwo n'okporo ụzọ ma ha nwere ike ịghọ aghụghọ na ọ ga-echetakwa na mba dị iche iche ma ọ bụ ọbụlagodi okporo ụzọ ebe a na UK na-enye ọkwa dị iche iche.
Wet ụzọ adịghị njọ ma ụzọ dị larịị silky nke anyị hụrụ n'anya na europe, nwere ike bụrụ aghụghọ ọ bụla ee ee ọ bụghị naanị m jidere ya, ọ dịkwa mma iche echiche banyere uwe yana ọtụtụ mgbanwe ị nwere dabere na nke mba ị nọ dị ka ọnọdụ okpomọkụ ọ dị, mana ọ bụrụ na enwere ohere igwe ojii, m ga-ahụrịrị na m ga-eyi uwe m, nke ikpeazụ, w dị ka ị chọrọ todo oyi, nke ahụ ga-agbadata ahụ ọkụ m na-ekwu, oge mmeghachi omume gị ga-adị nwayọ na njikwa ịnyịnya ígwè gị agaghị adị mma, were gị ka ị ga - etinye ya na ndụmọdụ hank ee ihe ọzọ nwere ike ịbụ, modgötter na nke gị iji igwe kwụ otu ebe. ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịnwe mmadụ n'azụ ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ìgwè ma fesa ya mmiri ma ọ bụ apịtị enweghị hankwo bụ fender gị ee tinye ya n'ihe banyere gị ọbụlagodi ma ị? bia kafe obughi gi mmiri bum oh absolute plus ka m nwere otu-over over akpụkpọ ụkwụ ọ dịghị ihe dị njọ karịa oyi na mmiri ụkwụ ee ee mgbe m na-ehicha ụkwụ m mgbe m na-agba ọsọ n'ihi na nke ahụ na-eme ka anụ ahụ m nke ukwuu nke a na-eme ka mmiri ghara ịmịchaa ka ị gafee oke iji mee ka ụkwụ gị ghara ịdị oke mma na akụkọ m nwere ọtụtụ akwara iji bụrụ ihe ziri ezi ugbu a, enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a ga-enyere gị aka iguzosi ike ọbụna n'ụbọchị mmiri kacha njọ. enwere m olileanya na ị ga-enwe ọ ridụ na mmiri ozuzo, ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ Atụmatụ na ihe ngalaba n'okpuru. Hey nwoke anyị na-eme obere aoh hello anyị nwere ụfọdụ ndị ọhụrụ Fans, ọ dịghị atụrụ yeah anyị nọ na wales ma ha bụ n'ezie ehi na m nnọọ ụjọ nke catsyeah chi ọ bụ dị ka ollie ndewo chere tupu, ha na-eche na-abịa
Ndị taya ụgbọ ala na-amị amị?
Slick Road tayaecheghị na mmiri.Bgba ígwèegbula oge ọ bụla iji tụlee arụmụka nke hydroplaning. Dị kaokporo ụzọmee mmiri ezughị okè na korota, nke na-enye n'ezie njide, jupụta na mmiri, mmanụ,okporo ụzọegbe na-emeokporo ụzọna taya ukwunkwafu.
(ịchapu kọmputa) - Ngwakọta nke ọgụgụ isi na sayensị siri ike na-agwa anyị na taya ụzọ ịnyịnya ígwè pụrụ iche na-agba ọsọ n'okporo ụzọ karịa gravel taya na gravel gravel na-agba ngwa ngwa na gravel - mana ole ole? Mee ụfọdụ nnwale dị mfe iji chọpụta ihe dị iche. - Ma mma nke gravel taya na gravel anyịnya igwe dị na ikike ha nwere gburugburu ya na nnukwu mpịakọta taya na usoro nzọ ụkwụ ndị a na-ahụkarị, ha na-enye njide ka mma na arụmọrụ na nkasi obi n'ọhịa. - Taya gravel dị ka Continental Terra Speed ​​bụ nnukwu ihe niile, mana nkwekọrịta a na-abawanye na-agba ọsọ na aspaị dị larịị ma e jiri ya tụnyere ụzọ dị ọcha dị ka GP5000 Continental - Ee, ọ dị mma, ka anyị mee nnwale ole na ole. - Ee, Ollie, gini kpatara anyi ji bia ebe a na mmiri ozuzo? - N'ihi na nke a bụ ebe a na-achịkwa achịkwa ya na-adịkarị larịị.
Ma echegbula, nyocha mbụ, laghachi n'ime - Oh ho ho ho ho, ọ masịrị m ihe ịrịba ama nke ya. (egwu obi ụtọ) - Nke mbụ, ka anyị leba anya na nkwụghachi nke ndị rollers ahụ ma ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla enwere ike ịkọwapụta n'etiti taya abụọ ahụ n'elu elu dị mma - mmekọrịta nke taya na elu ọ na-agagharị na -emepụta esemokwu na mgbe anyị na-akwọ ụgbọala anyị ga-emeri esemokwu a.- Na obere ịda na-agba ọsọ nke taya ahụ, obere esemokwu ị ga-emeri.- Nrụgide taya na-emetụta nguzogide na-agagharị, n'ihi ya, anyị ga-eji ule abụọ ahụ mee ule ahụ na 70 psi na nyocha ndị a na-enwekwa taya na-eme ka ndị ọzọ na-anọchi anya ihe ị ga-eji na ya.
Yabụ 90 psi maka GP5000 na 40 psi maka taya gravel Speed ​​nke Terra - Aka nri, dịka ị nwere ike ịhụ, enwere m obi ụtọ, mana ọtụtụ taya niile nọ na-arụ ọrụ okpomọkụ, nke pụtara Dr. Oliver, anyị nwere ike ịmalite nnwale ahụ. - Anyị nwere ike.
Yabụ Chris ga-anwa ịga n'otu ngwa ahụ na ọsọ ọsọ nke 45 km / h na nke abụọ dị iche iche anyị ga-eme. Anyị wee tụọ Pow. Ọ dị mkpa iji jigide ụdị ọsọ a na taya abụọ na nrụgide dị iche iche.
Emere nke a na QuarqPower Meter na Wahoo Head Unit nke anyi nwere n’ihu. Ọsọ ọ bụla ga-adị minit ise na taya ya na nrụgide dị iche iche. Ya mere, gbaa ọsọ, ka anyị gaa. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) - ise, anọ, atọ, abụọ na njikere. (Ọyụ egwu) - Chris ga - eme ọsọ ọsọ ọzọ nke nwere nsogbu ala; 70 psi na anyị ga-atụ anya na ọ ga-ewepụtakwu ike iji kwado otu ọsọ nke 45 km / h dịka ọ dị na mbu - Ee, 70 psi ollie, mmanya ise. - Nkeji ise. - Ị dịla njikere? - Gaa! - you nwere ike ịgụ m? - Ee, atọ, abụọ, otu, ga! (Joy music) - ọzọ 10 sekọnd.
Enwere m ezigbo ọkụ ma enwere m ike ịhụ ozi ahụ n'ihu m. Anam amata ihe na-eme. Gaa n'ihu ma kwụsị ya. (Egwú dị nro) Ugbu a, emeela m taya ahụ ma enwere m echiche otu ihe a ga-esi gaa, yabụ echere m na m nwere ike ịhapụ ruo mgbe m fụrụ n'ule a, ọ ga-abụrịrị otu mbọ kachasị iji lekọta otu ọsọ. (soft music) (taya screeching) Ka anyị gaa.
Nke ahụ bụ nkeji atọ, ọ bụghị nke ise. Mana nke ahụ pụtara na m nwere ike ịmegharị ule ahụ na 40 psi. Oh, nke ahụ siri ike karịa ka m tụrụ anya ya. (Blasts of air) Taya dị ugbu a ruo 40 psi, ọ dị mkpa ka ha kpoo ntakịrị maka ule ọzọ wee bụrụzie nkeji atọ ọzọ. (Joy music) - Oge maka nsonaazụ sitere na ịnyagharị. - Scientific bit, Ollie.- Enwetara m data gị wahoo, ka anyị lee anya.- Mgbe ahụ, anyị kwesịrị ịmalite ụzọ, 90 psi.- Ee, ka bụ 28mm GP500 na 90 psi, nke ahụ bụ ihe dị ka Ogwe 6 ka anyị tụlere mgbe anyị nọ n'èzí.
Yabụ, maka ule a, atụpụtara m ihe dị ka 299 watts na 45.8 km / h, nke ahụ bụ isi nyocha benchmark, nri? - Ee, yabụ belata nrụgide na nke a na 70 psito, ma jigide otu ọsọ ahụ n'otu ngwa ahụ na 45km / h, ị ga-enwerịrị 327 watts - nke ahụ bụ obere ntakịrị karịa - 28 watts ọzọ - ee, nnoo 10% ọzọ.- Ee, nke ahụ dị mkpa, nke ahụ bụ ihe ijuanya, yabụ ka anyị lelee gravel grares na 70 psi.
Nke a bụ gravel Terra Speed ​​40 mm n’obosara site na kọntinent. - Ọfọn, maka ule anyị ruru 449 watts na nkezi, maka kpọmkwem otu ọsọ ọsọ nke 45.8 km / h.
Ọzọ na otu gia, otú ahụ ka cadence bụ otu - Ya mere, ikpeazụ, 40 psi na gravel taya. - Ee, ezigbo gravel bipụta, nke a Ollie, enwere m obere mmechuihu ma ọ bụrụ na m eziokwu. Anọ m na-atụ anya ịme ya maka ezigbo nkeji abụọ, mana mgbe nkeji 14 m kụrụ aka n'apata mgbe ọ gbasịrị - (ọchị) Ọ bụghị ihe ijuanya, 516 watts! - Ee, mana agara m otu ọsọ ahụ; 45.8km / h, yabụ ma ọ dịkarịa ala m jisiri ike.- Ee, m na-ekwu, ọ bụ ihe ịtụnanya na ike ị nwere maka ya karịa.- Ee, nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche.- Ọfọn, m na-ekwu, nke ahụ dị mma ma na-eme ọ na-enye ihe na-egosi ihe dị iche na ntụgharị ntụgharị dị n'etiti taya abụọ na nrụgide dị iche iche, mana ọ bụghị onye nnọchianya nke ụwa n'ezie na wiil ndị a zuru oke. - mba.
Anyị ga-enweta ya n'èzí, enyi. - Ọ dị mma, ọ na-adị m ka mmiri na-ezo taa n’ihi na mmiri na-ezo. - Ee, anyị kwesịrị ịchọta ụfọdụ korota. - Bịanụ, ka anyị gụọ egwu) - Anyị ga-eme ule mpịakọta, mgbe m kwuru, m na-ekwu Chris, na nke a dị mma, dịkwa mma, ọbụlagodi nke korota.
Cheta Chris, ọ dịghị ere ahịa. - Nke ahụ dị ka ụdị ule m, Ollie. Aga m na-eme ma na-agba ọsọ na tụlee n'otu ọnọdụ iji jide n'aka na m aerodynamics na-agbanwe agbanwe - Ma anyị ga-abụ gravel mbụ Mee taya na mgbe ahụ na-ekpeghachi nnwale na taya igwe kwụ otu ebe; Chris ga-agbada n'ugwu ahụ na-ejighị brek ya lee anya ọ ga-aga mgbe ọ kwụsịrị na anyị ga-atụ ihe dị iche. - Ị dịla njikere? - Igwefoto dị na ya.
M ga ahapu gi. - Ka m pụọ. (adụ egwu) (Chris na-achị ọchị) - Ngwa ngwa - Ọ bụ nke a na - achọghị. - Olileanya ọ ga-eburu ụfọdụ ọsọ adịghị anya. - Owuwu ulo.
Bịanụ. Oh bia bianu! (Spin Tires) - Ọ na-esiri m ike ijide onwe m na Chris, mana dịka ị nwere ike ịhụ na ọ dị mfe na-enweghị ya ịbanye. (Ọyụ music) - 5,8! - You're na-enwetụ obere ọsọ ọsọ ugbu a.
M na-agbasi mbọ ike idebe - isii! 6.3! (Egwu na egwu) Oh, anyị akwụsịla. Oh mba, ha niile agaala! Mgbalị a nile a na-akwụsi ike.
Oh hụrụ n'anya, nke ahụ bụ ya. Ugbu a ị na-agbada na mkpọda a dị oke elu, Chris jisiri ike rute na gravel taya ahụ wee jiri mpempe nzu a kaa ya n'okporo ụzọ. Ugbu a, anyị ga-emegharị ule na GP5000sand wee hụ etu Chris ga - esi nweta ya - Ọsọ dị egwu, Ollie, nke ahụ bụ ha, ọ bụ ọsọ dị egwu. (A tọhapụrụ nrụgide ikuku) - Anyị na-eme ya niile ọzọ n'apata ụkwụ abụọ mana oge a na taya n'okporo ụzọ ka anyị wee tụọ anya ka Chris gaa n'ihu.
nri maka ndị na-agba ígwè
Echere m na anyị kwesịrị ịchọpụta. - Ana m atụ anya nnukwu ihe ebe a, Ollie, na-agụ m ọnụ .- Atọ, abụọ, otu, enwere onwe gị.- Oh, ka anyị gawa.
Rụpụta ntakịrị ọsọ site na akara ebe ahụ, ezigbo osooso, ịkwụsịtụ akpaaka akwụsịbeghị. Oh, ka anyị gaa Ugbu a anyị nọ, ugbu a anyị na-aga. Gaa na ekpe. - Emela pedal.
Nkwụnye agaghị ekwe - rapu n'aka ekpe dịka ọ dị na mbụ. Anyị nọ na 4.9, 5.4, oh.
Anyị adịla ọsọ ọsọ karịa ka anyị dị. Ebumnuche 3 km / h ngwa ngwa karịa ka m dịbu. Kedu ihe nke ahụ pụtara mgbe usoro ahụ gachara? (Egwu obi ụtọ) Ugbu a, anyị na-anya ugbua agafeela akara ka na-aga! Ka na-aga! Anyị ka na-akwọ ụgbọala, anyị ka na-aga, ha achọghị ịkwụsị.
Ma nke ahụ bụ ya. - cone nọ n’ebe ahụ bụ ebe Chris kwụsịrị mgbe ọ kụrụ taya gravel na-eju m anya banyere ya. Nke ahụ bụ otú o si gbapụ n'okporo ụzọ taya.
Eji m teepu m tụọ ya, ọ dịkwa kubit 65 n’ogologo na asatọ. - mita 19.8, nke bụ nnukwu ọdịiche iji mee ihe n'eziokwu, ọ bụghị ya? - Ee, m na-ekwu, nke ahụ bụ, ọ dị mma, ọ bụ maka otu ihe ahụ, nke ọma, ọ dị ntakịrị karịa ihe ndekọ ụwa na okpukpu atọ.- Nchịkọta maka gị ebe niile.- Ogologo ụzọ ma anyị kwughachiri nnwale a ugboro atọ ma dị o siri ike, nye ma ọ bụ were sentimita ole na ole, otu ihe ọ bụla oge ọ bụla, ọ na-apụta mgbe niile.
Ọ na-eju m anya na ị gara n'ihu --- ọsọ ọsọ n'okporo ụzọ The taya bụ ihe dị ka 4 km / h ngwa ngwa mgbe ị na-atụgharị, ruru ise maka ọsọ kachasị ọsọ. Yabụ, ee, enwere nnukwu ọdịiche. - Echere m na ọ na-egosi gị ole, nke ọma, wedata na-agba ọsọ na-agba ọsọ na ụdị taya ahụ.
Ma anyị ga-eme ule ọzọ. - Anyị na. Ajịrịja nkume? (Egwú dị nro) - Enweghị ezigbo ihe ịtụnanya, agbanyeghị na ọ ka na-atọ ụtọ ịhụ ọdịiche taya nwere ike ịme - enwere m mmetụta na ọ bụ ntakịrị ihe adịghị mma na ntakịrị mkparị na taya okporo ụzọ n'agbanyeghị, yabụ na anyị tinyere gravel taya. ma chọta ụfọdụ gravel.
Otu ule, naanị oge a ka m ga-anọ n'ọnọdụ gravel, ihe ọ bụla bụ nkịta nkịta ahụ n'ebe ahụ. - Enwere otutu gburugburu ebe a, ọ bụghị ya? - Ma hapụ brekị. Gaba. - A bụ gravel stance, mfe sere n'elu.
Oh, na ọsọ bụ ịrịba! Ngwa ngwa! Oh, nke a bụ ihe kachasị ọsọ nke na-agbanyeghị na gravel. (Joy Music) - Mgbe o jiri gravel grales gbadata n'okporo ámá ahụ, Chris rutere ebe a, anyị ga-ejikwa mpempe akwụkwọ ahụ dị ebe ahụ wee jiri ụkwụ ya na-aga n'ihu. Ugbu a, anyị ga-anwale taya okporo ụzọ ma hụ ihe na-eme. (Depressurise) - Anyị na-aga 90 psi, nke dị ntakịrị karịa mmanya isii.
Dịka anyị kwuru n'isiokwu a, nke a bụ ihe nnọchianya nke nrụgide ụwa n'ezie n'okpuru ọnọdụ kacha mma. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ebe a taa, anyị ga-agbanyeghị aka nri, taya okporo ámá, 90 psi na ollies na-eche m na ebe a na-atụdo taya. Ya mere, a ga m edobe ụzọ egwu ma nọrọ n'ụzọ m - atọ, abụọ, otu. (egwu dị egwu) - Chei, nke ahụ bụ 12 ụkwụ. - Nke ahụ pụtara na okporo ụzọ dị mma karịa gravel iri na abụọ. - Iri na abụọ ụkwụ n'ihu! Nri, mmiri na-ezo ugbu a ntakịrị oge, yabụ ị ga-agbaghara mkpuchi m, mana ọ tụrụ m n'anya na taya okporo ụzọ gara ngwa ngwa ma ọ bụ karịa karịa gravel taya ebe ahụ - ee, echere m, anyị kwesịrị ịkọwa na nke a ajịrịja ajị ajị ajịghị ajị ma ọ bụ oke ike na taya okporo ụzọ na-adị ngwa ngwa karịa, mana otu ihe doro anya bụ na enweghị ebe dị nso nso-ụzọ.
Agaghị m ebugharị otu ahịhịa ndị ahụ ma ọ bụ nke okwute ndị a taya dịka m ga-eji Terras mee. Ma ọbụlagodi mgbe ọ na-abịarute agagharị, ị naghị enwe mmetụta na ịchọrọ ịkwanye ya na nso ebe ọ bụla. Ma ha na-adị ngwa ngwa. - Echere m na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya maka taya okporo ụzọ iji gaa n'ihu n'ọnọdụ a, na nnwale a, n'ihi na a na-emepụta taya gravel iji nye gị ohere ijide gị n'ihi na ịchọrọ traction ọzọ na ebe ndị na-adịghị mma.
Ma ugbu a, enweghị traction ndị taya ndị a na-enye gị ohere ị na-aga, enwere obere esemokwu. (egwu dị nro) Ugbu a na anyị emeela nnwale atọ nke pseudoscientific anyị, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na taya okporo ụzọ na-amị amị bụ karịa ngwa ngwa gravel - ee, enwere oge na ebe maka ihe niile, agbanyeghị, Ollie, ma taa anyị emeghị 'nwalee taya ajịrịja ahụ na gravel ọ bụla na teknụzụ ebe m chere na ọ ga-enwu gbaa ma n'eziokwu, ụzọ taya ahụ dị oke mma.- Ee, m na-ekwu, ọ bụ apụl na mmanụ oroma, ọ bụghị ya? Have nwere ihe abụọ na-haziri maka kpamkpam dị iche iche na nzube na m na-eche na pụtara na anyị kwesịrị a sequel, anyị ga-aga na-taya abụọ si na-anwale ha na oru gravel. - M n’ezie nwere oge echi.
Y’oburu n’inwe obi uto n’edemede a, nye anyi nnukwu isi aka ma denye aha n’osimiri ma oburu n’inweghi, enwere m gravel gravel na Oman- Oh nke a ga adi nma.
Mmiri ozuzo ọ dị njọ maka igwe kwụ otu ebe?
Nakasị njọonye iroigwe kwụ otu ebe gị bụ mmiri ozuzo.Mmiri ozuzonwere ike ibute nchara na nchara na ụdị mmebi ahụ siri ike ilaghachi. Ọ bụrụ na ị na-ebi na mpaghara ebe ọmmiri ozuzo aotutu ma ọ bụ iru mmiri, na-ahapụgị ọgba tum tumma ọ bụ unyiigwe kwụ otu eben'èzí nwere ike ime ka ọ daa ngwa ngwa karịa ka ọ dị n'ime.02.25.2020
Ndi wider taya ka mma na igwe kwụ otu ebe?
Taya sara mbara
Na-agbanwe gịtayamakammiri ozuzoọnọdụ bụ nnukwu echiche. Na-etinye na awider tayaga-enye gị a ibu kọntaktị patch na ala nke pụtarammajidere n'okporo ụzọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị lebara anya na Biketech na nke mbụ, ị ga-amata nnukwu nrụgide na njikọta na obosara. Ugbu a ị nwere ike ghara ịghọta ihe kpatara enwere nnukwu mmụba a, mana nke ahụ dị mma n'ihi na anyị ga-egwupụta ma chọpụta. Ihe mere anyi jiri chee echiche banyere ya n’oge na adighi anya bu nbata ndi ohuru nke B B ma maa mma nke oma SES 4.5 aar diski wiil ndi ozo n’ile ha anya dika mb, ha nwere profaịlụ rim di iche n’ihu na azu ma agbakwunyere na Chris King hubs, mana ha na-ekwo ekworo n'ihi na ndị a bụ ókèala ọhụrụ na-akpali akpali maka mmalite, ha nwere profaịlụ a na-ahụ maka diski kpọmkwem mgbe ahụ ha kwukwara n'eziokwu ihe mere m ji hụ igwe ndị a na igwe ịgba ọsọ na-atụle na 31 na ọkara mil obosara obosara dị oké mkpa 25 nnù ime rim obosara The imewe bụ nanị mgbe a na-adịbeghị anya mmepe na ọduọ bike imewe ọbụna ga-ekwe omume.
Eziokwu ahụ bụ na ha akọwaghị pụtara na ha nwere ike ịdị obosara n'ihi na enweghị mmachi obosara nke ndị calipers na ọzọ akọwapụtaghị ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ikike karịa n'ihi na ndị caliper anaghị egbochi gị ọzọ, ọ bụ ya mere anyị ji chee banyere ya, kedu maka ajụjụ mbụ anyị, kedụ ihe kpatara taya ndị a jiri na-agbasawanye agbasa? ripsnow bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ adọrọ, kamakwa uru ndị kachasị dị mkpa nke taya buru ibu na -emepụta nkwụsi ike na-agagharị. O siri ike ịmata ihe anyị rutere na akpa a ebe ọ bụ na data dị adị na-apụ apụ kemgbe oge ụfọdụ, mana ọ dị ebe ọ bụla na taya 28C na-apụta ihe ruru 2 ruo 3 watts ngwa ngwa karịa nke 25C taya ya na nke ahụ wheel na na 40 Mara na ihe dị iche bụ ọbụna ibu na 23 na ihe mere, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ tiori, bụ na nke a bụ n'ihi na udi nke taya nzọ ụkwụ na otú ndị wider a taya bụ, na mkpumkpu akara ukwu ma si otú ahụ ka mma ịgbanye nguzogide, nke dị ezigbo mkpa ugbu a, agbanyeghị, amataghị na ị chọrọ ma akwa obosara na taya sara mbara iji bulie elele ndị a dịka profaịlụ profaịlụ taya ahụ dị ezigbo mkpa mgbe ị gafere Chee maka ụdị ọdịdị kọntaktị ahụ. , kamakwa profaịlụ cross-sectional dị mkpa maka ntụgharị na taya, nke dị ntakịrị ka mmetụta squirming ị na-enweta mgbe nrụgide dị ezigbo ala, n'ihi na ịgbagha na nke a pụtara esemokwu na esemokwu na nke a pụtara ịbawanye ụba r esistance, otú ị na-ahụ na nke a 28 C ilo on a obosara ntinye-larịị rim na ugbu a n'ezie tụọ oge ruo 31 that na cross-sectional profaịlụ n'ezie square, n'ezie ọma na-akwado na n'ezie ọma na-akwado na azụ, na kwa Ọ pụtara na ọ bụ ihe aerodynamic, ugbu a na ụlọ nyocha na ngwa ngwa a na-akụzi ya ọ dị mfe ịkọwapụta nsonaazụ ndị a mana ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na nyocha okporo ụzọ mepere emepe, nke igwe kwụ otu ebe na-eduga, na-atụ aro na ule ụlọ nyocha bụ akụkụ dị oke mkpa nke ịnya ụgbọ ala na nke ahụ bụ ịma jijiji na ọ bụ mkpọtụ okporo ụzọ na-eme ka anyị belata ma ọ na-atọ ụtọ, ọ bụghị ya, n'ihi na mgbe anyị gafere Cobblestone ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala, ọ dị ka o doro anya na ịma jijiji na ịma jijiji na-ebelata, anyị nwere ike ịnwe mmetụta ya, ma gịnị mere mgbe anyị na-ele ndị nkịtị? Anyị abịaghị n'otu nkwubi okwu ahụ na asphalt, ọ dị nwute na anyị bụ ndị isi na nkeji ịnyịnya ígwè mgbe ha nwalere na taya nke sara mbara karị na-apụta ngwa ngwa na obere nrụgide karịa nke siri ike mgbe anyị na-ekwu obere nrụgide. N'ezie anyị pụtara ya, enwere m naanị 50 psi na ndị ahụ 28 na ihe kpatara ya? bụ n'ihi na ụlọ nyocha na-arụ ọrụ ike siri ike na-apụta ngwa ngwa n'ihi na enwere mfu ọhụụ, na -emepụta ngagharị na esemokwu nke anyị kwurịtara banyere ya, mana ịkwesịrị icheta ịkwụsị ịkwụsị nrụgide gị. tinghapụ taya mgbe ha malitere squirming Ause na nke a ekwu na ị ga-akwụsịlata ọzọ ugbu a, enwere m ekele na mbenata nguzogide na-agagharị agaghị abụrịrị ihe niile na njedebe maka anyị niile mana ọ dị ka ọ doro anya na ezigbo nnukwu uru nke ibelata vibration ga-abụ nkasi obi.
Maka anyị Lacey, ị nwere ike ịnya ụgbọ ala kachasị mma n'ụwa, mana ọ bụrụ na ị nwere obere taya dị warara na ya, ọ gaghị enwe ntụsara ahụ dị ka nke siri ike, nke klaasị yana 28c- Taya agwụbeghị taya ndị ọzọ na-enye gị njide. akụkụ ugbu a ọ na-abịa azụ a dum kọntaktị elu ihe kamakwa a softer re ifen bụ odi mfe n'okporo ụzọ ugbu a, m kweta na mgbe ụfọdụ m na-eche dị ka m na-na-na na na na na na na na na na na na na na-achọghị ịnwale nke a site na site na, mana ọbụlagodi ọsọ m na-agba ugbu a ọ na-adị m mma ma m dabere na ya. Enwere akụkụ ọzọ na njikọta zuru oke d olu ikuku, nke kwesịrị ịpụta na ọ ga-abụrịrị na ị ga-eme ka ọ dị elu ọbụna na nrụgide dị ala, mgbe ahụ ị gbakwunye ndị a na-emepụta ihe ndị a, anyị na-agba agba tubeless anyị dị ezigbo mma na ụlọ na-emesi obi ike na ị Mụta site na nkọwa anyị na-ahụ mgbe niile, gịnị kpatara, mgbe, gịnị kpatara ya? Ihe njikọ dị mma nke na uru a ka ga-agba ọsọ 25 na ọ bụ ezigbo ihe bara uru na-adaberekarị n'ihe kachasị ọsọ ka enwere ike ịnwe ihe mbụ na nke kachasị, dịka m kwuru na mbụ, ị ga-achọrịrị diski breeki diski iji mee baptizim. gold, na pros doro anya na-enweghị ike iji ndị a, ma mgbe n'ezie na eziokwu na eziokwu bụ na wider taya bụ a bit arọ, ndị a bụ ihe dị ka 20 gram kwa wheel arọ karịa ha 25 ụmụnna na mgbe ahụ e nwere bụ kwa eziokwu na e nwere obere aerodynamic mwepu na wider taya, nke a na-ezigbo obere n'ihi na ha na-iji soro wider taya, ma ọ bụrụ na ị na-agbalị dabara a wider taya na a rim imewe maka a23 ma ọ bụ 25 N'ezie e nwere ọdịnala na Pro Peloton nwere ike mgbe ụfọdụ a kọwara ya dị ka onye tanka mmanụ ebe ahụ ọ na-ewe anyị ogologo oge ịgbanwe ụzọ naanị hụ ọnụọgụ nke ndị na-anaghị eji ụgbọ elu eme ihe n'agbanyeghị uru doro anya maka ha nke taya nwere ike ịdị ntakịrị. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ebe ihe a niile gwụrụ, echere m na abụba anyị nwetara na onye ga-abanye n'ụgbọ mmiri, ahụbeghị data ahụ, ọ na-esiri gị ike ịrụ ụka yabụ echere m na ọdịnihu ga-adị mma karịa chọrọ ịhụ a bit ọzọ ozi na ndị a anyịnya igwe m na-agba ịnyịnya na anyị nwere unboxing isiokwu na kpọmkwem ntọala ndị a, ma ọ bụghị, ị nwere ike ghara imeri ọzọ otú ịrịọ mgbaghara maka nke ahụ ma ọ bụ hụ site na site na guru n'azụ MVwheels na ifufe ọwara pịa ebe ahụ ma ọ bụ hụ na ịdenye aha na GCN, ka ịmee, pịa ụwa naanị
Gịnị mere mmiri ozuzo ji eme gị ọrịa?
Oyi bu nje virus n’adighi akpatammiri ozuzo. Otú ọ dị, ụfọdụ nje virus (dịka Rhinovirus) na-agbasa ngwa ngwa n'oge oyi n'ihi na ha na-arụ ọrụ nke ọma na obere okpomọkụ. Oge oyi na-adaba na oyi mammiri ozuzoenweghị ikekpata gịijide oyi.28.03.2019
Kedu ụdị taya ị na-eji mmiri ozuzo?
Maka ịnyagharị na mmiri ozuzo, ị ka mma iji taya taya n'okporo ámá nke nwere usoro nzọ ụkwụ na-adịchaghị mma. Ha nwere uzo mmiri ozuzo na-eme ka mmiri ghara isi na etiti iji meziwanye njide. Otú ọ dị, gbaa mbọ chọpụta ma taya ọ bụla ị nwere mmasị kwesịrị ekwesị maka ụzọ mmiri.
-esi esi eme uzo crunches
Kedu taya kacha mma maka ọgba tum tum na ihu igwe?
Nke a bụ ndụmọdụ anyị na nke kachasị mma taya ọgba tum tum maka ihu igwe mmiri. Na mpaghara ọ bụla ọgba tum tum na-arụ ọrụ, ọ na-enwekarị otu taya nke na-apụ apụ dị ka ihe kachasị mma na ụdị ahụ. Na usoro nke mmiri ihu igwe arụmọrụ, e nwere maa a ọnụ ọgụgụ nke taya na-arụ ọrụ nke ọma - ma ọ bụ nanị na ọ dịghị taya nwere ike dakọtara na Michelin Pilot Road 4.
Ọ dị egwu ịnya ọgba tum tum na mmiri ozuzo?
Ọ bụ ezie na ọ bụ njem, ịnya na mmiri ozuzo nwere ike bụrụ ihe dị oke egwu na ọbụlagodi egwu ndụ. Zọ ndị ahụ na-amị amị, ọhụụ gị na-ebelatakwa n'ihi ntụgharị uche. Tinye ifufe na eserese a, ị nọkwa maka ihe ịtụnanya. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịnwe taya igwe kwụ otu ebe maka mmiri ozuzo.